ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: After2years???
After2years???
အိပ်မက်တွေကို အသက်သွင်းဖို့ နိုးထ
ဒါပေမယ့် အမှောင်တွေက ညမဟုတ်တော့လို့လား
အမှောင်ဟာ ည မဟုတ်ခဲ့မှတော့
You are in Thailand. We are aiming at Japanese culture, or alike.
ဂျပန်မှာ အနုပညာရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီနေ့ ကလေးသူငယ် ပညာပေးကား ရိုက်၊ မနက်ဖြန် အပြာကားရိုက်ပြီး သဘက်ခါကျတော့ အနုပညာလက်ရာမြောက်တဲ့ ရုပ်ရှင် ရိုက်ချင်ရိုက်ပါမယ်။ နောက်နှစ်ကျတော့ တုံးလုံးချွတ်ပြီး ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံချင် ခံပါမယ်။ ဒါကို လက်ခံပါတယ်။
အစ်မက ထိုင်းကို ရောက်နေလို့ ထိုင်းက ဖြစ်ရပ်တွေပဲ သိတာကိုး။